परमेश्‍वर र येसुबारे सत्य कुरा
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या १ २०२०
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काजाक (अरबी) काबीय काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गिटोंगा गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चेक चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
मानिसहरू थुप्रै देवीदेवताको उपासना गर्छन्‌ तर साँचो परमेश्‍वर एक जना मात्र हुनुहुन्छ। (युहन्‍ना १७:३) उहाँ “सर्वोच्च परमेश्‍वर” हुनुहुन्छ। उहाँ सबै थोकको सृष्टिकर्ता र जीवनको मूल हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हाम्रो उपासना पाउन योग्य हुनुहुन्छ।—दानिएल ७:१८; प्रकाश ४:११.
बाइबलका पाण्डुलिपिहरूमा परमेश्‍वरको नाम लगभग ७,००० पटक पाइन्छ
परमेश्‍वरको नाम यहोवा हो
प्रभु, परमेश्‍वर, बुबा—यहोवाको केही पदवीहरू
परमेश्‍वरको नाम के हो? परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्छ: “म यहोवा हुँ। मेरो नाम त्यही हो।” (यसैया ४२:८) बाइबलमा परमेश्‍वरको नाम लगभग ७,००० पटक उल्लेख गरिएको छ। तर थुप्रै बाइबलमा परमेश्‍वरको नाम हटाएर “परमप्रभु” जस्ता पदवीहरू राखिएका छन्‌। परमेश्‍वर तपाईँ उहाँको साथी बनेको चाहनुहुन्छ, त्यसैले ‘उहाँको नाम पुकार्न’ परमेश्‍वर तपाईँलाई आग्रह गर्नुहुन्छ।—भजन १०५:१.
यहोवाका पदवीहरू। बाइबलमा यहोवाका विभिन्‍न पदवीहरू पाइन्छन्‌, जस्तै: “परमेश्‍वर,” “सर्वशक्‍तिमान्‌,” “सृष्टिकर्ता,” “बुबा,” “प्रभु” र “ब्रह्‍माण्डका मालिक”। बाइबलमा उल्लेख गरिएका थुप्रै प्रार्थनामा यहोवालाई उहाँको पदवी वा नामद्वारा सम्बोधन गरिएको छ।—दानिएल ९:४.
परमेश्‍वरको स्वरूप। परमेश्‍वर अदृश्‍य व्यक्‍ति हुनुहुन्छ। (युहन्‍ना ४:२४) “परमेश्‍वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन।” (युहन्‍ना १:१८) बाइबलमा उहाँका भावनाहरू व्यक्‍त गरिएको छ। जस्तै: खराब मानिसहरूले विद्रोह गर्दा उहाँ दुःखी हुनुभएको विवरण बाइबलमा पाइन्छ। तर असल मानिसहरूलाई “उहाँ मन पराउनुहुन्छ” भनेर पनि बाइबलमा लेखिएको छ।—हितोपदेश ११:२०; भजन ७८:४०, ४१.
परमेश्‍वरका मनमोहक गुणहरू। परमेश्‍वर कुनै मानिसलाई उसको पृष्ठभूमि वा राष्ट्रको आधारमा पक्षपात गर्नुहुन्‍न। (प्रेषित १०:३४, ३५) परमेश्‍वरका थुप्रै मनमोहक गुण छन्‌, जस्तै: उहाँ कृपालु र दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ हतपती रिसाउनुहुन्‍न अनि अटल प्रेम र सत्यले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। (प्रस्थान ३४:६, ७) तर उहाँका चार वटा गुण भने विशेष छन्‌।
शक्‍ति। परमेश्‍वर “सर्वशक्‍तिमान्‌” हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ आफूले गरेको सबै प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।—उत्पत्ति १७:१.
बुद्धि। परमेश्‍वरको बुद्धि अथाह छ। त्यसैले बाइबलले उहाँ “एक मात्र बुद्धिमान्‌ परमेश्‍वर” हुनुहुन्छ भनी बताउँछ।—रोमी १६:२७.
न्याय। परमेश्‍वर सधैँ सही काम गर्नुहुन्छ। “उहाँको काममा कुनै खोट छैन” अनि “उहाँ कहिल्यै अन्याय गर्नुहुन्‍न।”—व्यवस्था ३२:४.
प्रेम। “परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्छ” भनी बाइबल बताउँछ। (१ युहन्‍ना ४:८) परमेश्‍वर प्रेम देखाउनु मात्र हुन्‍न तर उहाँ प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँका सबै काममा उहाँको उत्कृष्ट प्रेम झल्किन्छ अनि यसबाट हामीले थुप्रै लाभ उठाउन सकेका छौँ।
परमेश्‍वर र मानिसबीचको मित्रता। परमेश्‍वर हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने मायालु बुबा हुनुहुन्छ। (मत्ति ६:९) परमेश्‍वरमा विश्‍वास गऱ्‍यौँ भने हामी उहाँको साथी बन्‍न सक्छौँ। (भजन २५:१४) वास्तवमा प्रार्थना गरेर तपाईँ उहाँको नजिक हुन सक्नुहुन्छ र ‘आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि बिसाउन’ सक्नुहुन्छ। किनकि उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ।—१ पत्रुस ५:७; याकुब ४:८.
परमेश्‍वर र येसुबीच कस्तो भिन्‍नता छ?
येसु परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न। परमेश्‍वरले येसुलाई सबैभन्दा सुरुमा आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ अरू सृष्टिभन्दा फरक हुनुहुन्छ। बाइबलले येसुलाई परमेश्‍वरको छोरा भन्छ। (युहन्‍ना १:१४) येसुले “मुख्य कारिगर”-को रूपमा यहोवासँगै मिलेर सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो।—हितोपदेश ८:३०, ३१; कलस्सी १:१५, १६.
येसुले कहिल्यै आफू परमेश्‍वर भएको दाबी गर्नुभएन। येसुले आफूबारे यसो भन्‍नुभयो, “म उहाँको [परमेश्‍वरको] प्रतिनिधि हुँ र उहाँले नै मलाई पठाउनुभएको हो।” (युहन्‍ना ७:२९) आफ्नो एक जना चेलासित कुराकानी गर्नुहुँदा येसुले यहोवा “मेरा बुबा र तिमीहरूका बुबा अनि मेरा परमेश्‍वर र तिमीहरूका परमेश्‍वर” हुनुहुन्छ भनी बताउनुभयो। (युहन्‍ना २०:१७) यहोवाले येसुलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुभयो र स्वर्गमा जीवन दिनुभयो। साथै आफ्नो दाहिने हाततर्फ उच्च पद पनि दिनुभयो।—मत्ति २८:१८; प्रेषित २:३२, ३३.
परमेश्‍वरसित नजिक हुन येसुले तपाईँलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ
आफ्नो बुबाको विषयमा बताउन येसु पृथ्वीमा आउनुभयो। यहोवाले येसुबारे यसो भन्‍नुभयो, “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्‌। उनको कुरा सुन।” (मर्कुस ९:७) परमेश्‍वरलाई येसुले जत्तिको राम्ररी अरू कसैले चिनेको छैन। त्यसैले उहाँले यसो भन्‍न सक्नुभयो, “बुबालाई छोराले अनि ती मानिसहरूले मात्र चिन्छन्‌, जसलाई छोराले प्रकट गर्न चाहन्छ।”—लुका १०:२२.
येसुले परमेश्‍वरका गुणहरू दुरुस्त झल्काउनुभयो। येसुले आफ्नो बुबाका गुणहरू दुरुस्तै झल्काउनुभयो। त्यसैले उहाँले यसो भन्‍न सक्नुभयो, “जसले मलाई देखेको छ, उसले बुबालाई पनि देखेको छ।” (युहन्‍ना १४:९) येसुले आफ्नो बोली र काममा परमेश्‍वरको प्रेम झल्काउनुभयो। यसले गर्दा मानिसहरू परमेश्‍वरसित नजिक हुन सके। उहाँले यसो भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन।” (युहन्‍ना १४:६) उहाँले यसो पनि भन्‍नुभयो, “साँचो उपासकहरूले पवित्र शक्‍तिको निर्देशनमा अनि सत्यबमोजिम परमेश्‍वरको उपासना गर्नेछन्‌ किनकि परमेश्‍वर यस्तै उपासकहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ।” (युहन्‍ना ४:२३) कल्पना गर्नुहोस्‌ त! यहोवा तपाईँजस्तै सत्यको निम्ति भोकाएका मानिसहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ।
साँचो ईश्‍वर को हुनुहुन्छ?
ईश्‍वरसित नजिक हुन सुरुमा उहाँलाई चिन्‍नुपर्छ। तपाईँ कसरी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ?
येसुलाई किन परमेश्‍वरको छोरा भनिएको हो?
मानिसहरू जसरी बुबा बन्छन्‌ त्यसरी परमेश्‍वर बुबा बन्‍नुभएन। त्यसोभए येसु कसरी परमेश्‍वरको छोरा हुनुभयो?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने परमेश्‍वर र येसुबारे सत्य कुरा
सत्य कहाँ पाउन सकिन्छ?
बाइबल—सत्य कुराको भरपर्दो स्रोत
परमेश्‍वरको राज्यबारे सत्य कुरा
भविष्यबारे सत्य कुरा
सत्यले तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा सत्य कहाँ पाउन सकिन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा सत्य कहाँ पाउन सकिन्छ?
प्रहरीधरहरा सत्य कहाँ पाउन सकिन्छ?
के येसु सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ?